2022 को सबै भन्दा राम्रो सिरेमिक हीटर, कुन छनौट गर्ने?
जब जाडो आउँछ र घरमा चिसो सुरु हुन्छ, हामीले तताउने यन्त्र तान्नुपर्छ। तपाईंले घरलाई तताउनका लागि कुन तताउने यन्त्रहरू जिम्मेवार छन् भनेर कसरी छनौट गर्ने र हामीलाई बिजुलीको बिल बचत गर्न मद्दत गर्न जान्नुपर्छ। ताप को मुख्य दोष बिजुली को लागत हो। घरहरूको लागि कुशल तताउने प्रकारहरू मध्ये एक हो सिरेमिक हीटर। यद्यपि, बजारमा धेरै सिरेमिक हीटर मोडेलहरू छन्।
तसर्थ, हामी तपाईंलाई सबै विशेषताहरू बताउन यो लेख समर्पित गर्न जाँदैछौं, के एक सिरेमिक हीटर राम्रो गुणस्तर हुनुपर्छ र बजार मा सबै भन्दा राम्रो हो।
सबै भन्दा राम्रो सिरेमिक हीटर
अर्को हामी हाम्रा घरहरूमा तताउनको लागि सबैभन्दा धेरै माग भएका केही मुख्य मोडेलहरू सूचीबद्ध गर्नेछौं। हामी यसको प्रत्येक विशेषताहरू र यसको फाइदाहरू विश्लेषण गर्न जाँदैछौं।
Rowenta Mini Excel Eco... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
Orbegozo CR 5017 ... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
Orbegozo FHR 3050... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
प्रो ब्रीज मिनी... सुविधाहरू हेर्नुहोस् १,०1.714। समीक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्
Orbegozo FHR 2040 -... सुविधाहरू हेर्नुहोस् १,०167। समीक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्
प्रो ब्रीज मिनी... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
सबै भन्दा राम्रो	Rowenta Mini Excel Eco...
मूल्य गुणस्तर	Orbegozo CR 5017 ...
हाम्रो मनपर्ने	Orbegozo FHR 3050...
प्रो ब्रीज मिनी...
यो सिरेमिक हीटरमा समायोज्य शक्तिको साथ दुई स्थानहरू छन्। यसले उत्पन्न गर्ने आवाज अनुसार शक्ति सेट गरिएको छ। यदि हामीले यसलाई 1.000 को पावरमा राख्यौं भने यो साइलेन्ट मोडमा हुनेछ, जब हामी यसलाई राख्छौं 1.800W को अधिकतम शक्ति हामी यो केहि चर्को हुनेछ। यसमा शीत रोक्नको लागि इलेक्ट्रोनिक उपकरणको साथ थर्मोस्टेट छ। यसको डिजाइन एकदम सुरुचिपूर्ण छ र यसमा प्रयोग गर्न सजिलो स्क्रिन छ।
यसमा एक पछि फिल्टर छ जुन सजिलै केहि संग धुन सकिन्छ ताकि धुलो जम्मा नहोस्। यस सिरेमिक हीटरको साथ तपाईले इको इनर्जी फंक्शनमा राखेर 50% सम्म ऊर्जा बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
Cecotec सिरेमिक हीटर तयार न्यानो
यो ठूलो शक्ति संग सिरेमिक हीटर को एक प्रकार हो। यसको अधिकतम शक्ति 1500W र न्यूनतम 750W हो। यसमा सुरक्षा ग्रिडहरू छन् जसले सम्भावित घरेलु समस्याहरूबाट बच्न मद्दत गर्दछ। यसको प्रणालीले ठूलो गति र दक्षताका साथ ताप उत्सर्जन गर्न मद्दत गर्छ, विद्युतीय लागत घटाउँछ। यसमा ऊर्जा बचत गर्न र आवश्यक परिस्थितिहरूमा अनुकूलन गर्न धेरै मोडहरू छन्। थप सुरक्षाको लागि, असामान्य स्थितिमा सर्दा सम्भावित पतनबाट बच्नको लागि यसमा एन्टि-टिप सेन्सर छ।
Cecotec बाथरूम हीटर ...
यसको प्रविधि एकदम आधुनिक छ र यो कुशलतापूर्वक 20 वर्ग मिटर कोठा तताउन सक्षम छ। यसमा एर्गोनोमिक ह्यान्डल छ जसले यसलाई सजिलै सार्न अनुमति दिन्छ। यसमा घरेलु आगोबाट बच्न ओभर हिटिङ सिस्टम पनि छ।
Orbegozo FHR 3050 सिरेमिक हीटर
यो मोडेल धेरै जटिल हुन नचाहनेहरूका लागि केही हदसम्म सरल छ। यसमा दुईवटा तातो शक्तिहरू र ओभरहेटिंग विरुद्ध सुरक्षा प्रणाली छ। यसको शरीर पूर्णतया धातु र राम्रो फिनिश संग छ।
तपाईं तापक्रम समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं उपकरण काम गर्न चाहनुहुन्छ र यो पनि एक स्वचालित सुरक्षा बन्द छ। यसमा तातो राम्रोसँग फैलाउन फ्यान छ र नन-स्लिप खुट्टा कुनै पनि सतहको लागि हो।
XAXAZON बाथरूम हीटर
यो सिरेमिक हीटरमा कोठाको एकदमै छिटो तताउने सुविधा छ। यसले हामीलाई बिजुली बचत गर्न मद्दत गर्न कम बिजुली खपत छ। यसको टाइमर पूर्ण रूपमा समायोज्य छ र तपाईंलाई कन्फिगर गर्न अनुमति दिन्छ 24 घण्टा प्रोग्रामयोग्य सम्म प्रयोग गर्नुहोस्। हामीलाई सबैभन्दा बढी चाहिने एकलाई सजिलै छान्नको लागि यसमा दुईवटा तापक्रम मोडहरू छन्।
XAXAZON बाथरूम हीटर...
बिल्ट-इन सिरेमिकले कोठालाई छिटो र सुरक्षित रूपमा तातो बनाउन मद्दत गर्दछ। यसको लागि, यो एक डबल सुरक्षा प्रणाली छ। पहिलो त अति ताप सुरक्षा हो जसमा थर्मोस्ट्याट रिसेट हुनेछ यदि विद्युत आपूर्ति असामान्य रूपमा उच्च तापक्रममा छ। दोस्रो एन्टि-टिप प्रणाली हो।
Olimpia Splendid Wall माउन्ट गरिएको इलेक्ट्रिक सिरेमिक हीटर
यो सिरेमिक हीटरमा सुरुचिपूर्ण र बहुमुखी डिजाइन छ। यसलाई टाढाबाट कन्फिगर गर्न सक्षम हुन योसँग इलेक्ट्रोनिक रिमोट कन्ट्रोल छ। यसको लागीसाधारण टच कन्ट्रोलको साथ एलसीडी स्क्रिन फिचर गर्दछ। हामी कम्तिमा सम्भव आवाज संग हाम्रो कोठा तताउन सक्छौं। तापक्रम वास्तविक समयमा स्क्रिनमा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ।
यो अति तताउने र एन्टिटिप विरुद्ध दुई सुरक्षा गियरहरूसँग सुसज्जित छ। यदि उपकरण 65 डिग्री पुग्छ भने, यो स्वचालित रूपमा बन्द हुनेछ। तिनीहरूसँग सञ्चालनका धेरै मोडहरू छन्। प्राकृतिक तातो हावा मोड र रोटरी मोड। हामीले काम गर्न चाहेको शक्तिलाई हाम्रो आवश्यकता अनुसार समायोजन गर्न तपाईंले कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रो ब्रीज मिनी सिरेमिक हीटर
यो मोडेल बजारमा सबैभन्दा हल्का र सबैभन्दा पोर्टेबल मध्ये एक हो। यो आकारमा निकै सानो भएपनि यो निकै शक्तिशाली छ । यो बाथरूम र कार्यालयहरू जस्तै सानो कोठा तताउन उपयुक्त छ। यसको प्रविधिले छिटो र अधिक कुशल ताप प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ अन्य परम्परागत हीटरको तुलनामा।
तपाईं आरामदायी तापमानको लागि थर्मोस्टेट समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा एक सुरक्षा प्रणाली पनि छ जसले अति तताउने र एन्टि-टिप स्विचबाट सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन्छ।
सिरेमिक हीटर के हो
यो एक प्रकारको हीटर हो जसले सिरेमिक प्लेटहरू मार्फत विद्युतीय ऊर्जालाई तातोमा रूपान्तरण गर्न सक्षम हुन्छ। सिरेमिकले हावा उडाउने फ्यानहरू मार्फत प्रभावकारी रूपमा ताप वितरण गर्न मद्दत गर्छ। हावा सिरेमिक प्लेटहरू मार्फत केसलाई अधिक तताउन बिना जान्छ, जसले यसलाई घरको लागि एकदम सुरक्षित बनाउँछ। तिनीहरू उपकरण छुन र जलाउन डराउने छैनन्।
सिरेमिक हीटरका फाइदाहरू
यस प्रकारको हीटर प्रयोग गर्दा धेरै फाइदाहरू छन्:
यो बारेमा छ धेरै सस्तो र शक्तिशाली ग्याजेटहरू। पैसाको लागि मूल्यको सम्बन्धमा तिनीहरू सबै भन्दा राम्रो छन्।
तिनीहरू धेरै छिटो तातो हुन्छन् सिरेमिक प्लेटहरूको अपवर्तक क्षमताको लागि कोठाहरूमा।
Se धेरै जाडोको लागि राख्न सकिन्छ बिग्रिएको बिना।
यो छ सम्पूर्ण परिवारको लागि प्रयोग गर्न धेरै सुरक्षित।
तिनीहरू ढुवानी गर्न सजिलो छन् र तिनीहरूको आकारले यसलाई कडा ठाउँहरूमा राख्न अनुमति दिन्छ।
यसलाई कुनै मर्मत र इन्धन आवश्यक पर्दैन.
यसको दक्षता कम ऊर्जा खपतको लागि तयार छ, जसले बिजुली बिलहरूमा बचतमा अनुवाद गर्दछ।
सिरेमिक हीटर कसरी छनौट गर्ने
सिरेमिक हीटर छनोट गर्न जुन तपाइँको सर्तहरू अनुरूप छ, तपाइँले निम्न चरहरू विश्लेषण गर्नुपर्छ:
जसमा पोर्टेबल डिजाइन छ: तपाईंले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ढुवानी गर्न पर्याप्त सजिलो डिजाइन भएको मोडेल छनोट गर्नुपर्छ।
साइज: यो कम्प्याक्ट मोडेल छनोट गर्न सल्लाह दिइन्छ कि यसलाई कहीं पनि राख्न सक्षम हुन।
पावर: यो हामीले तताउन चाहने कोठाको आकारमा निर्भर गर्दछ। केवल4वर्ग मिटरको बाथरूम तताउन हामीलाई 450W भन्दा बढी पावर चाहिन्छ। यदि एउटा कोठा १० वर्ग मिटर भन्दा बढी छ भने, तपाइँलाई कम्तिमा 10W पावर चाहिन्छ।
ऊर्जा दक्षता: यन्त्रमा कम ऊर्जा खपत हुनको लागि, तपाईंले उच्च ऊर्जा दक्षता भएकाहरू छनौट गर्नुपर्छ।
सिरेमिक हीटर वा फ्यान हीटर?
थर्मो-फ्यानहरू ती उपकरणहरू हुन् जसले वातावरणबाट अवशोषित हावालाई इच्छित तापक्रममा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्दछ। तैपनि, तिनीहरूसँग उच्च ऊर्जा लागत छ र त्यो बिजुली बिलमा अनुवाद गरिएको छ। यदि हामी अधिक कुशल र प्रयोगकर्ता-मैत्री ताप प्रणाली चाहनुहुन्छ भने, सिरेमिक हीटर एक राम्रो विकल्प हो।
सिरेमिक हीटर को सबै भन्दा राम्रो ब्रान्ड
तिनीहरू पातलो कालो फिनिशको साथ डिजाइनमा धेरै सुन्दर हुन्छन्। पैसाको लागि मूल्यको सम्बन्धमा तिनीहरू धेरै राम्रो विकल्प हुन् र प्रदर्शनको सर्तमा पनि। यसको हीटरमा शक्तिलाई विनियमित गर्ने क्षमता छ जसमा हामी यन्त्रले काम गरोस् र आवाज कम गर्न चाहन्छौं।
यसको मोडेलहरू छिटो र कुशलतापूर्वक कोठाहरू तताउन तयार छन्। यसका अधिकांश हिटरहरूमा कुनै पनि प्रकारको दुर्घटनाबाट बच्न सुरक्षा ग्रिल हुन्छ। तिनीहरू एकदम सुरक्षित प्रणालीहरू छन् र राम्रो गुणस्तर-मूल्य अनुपातको साथ।
तिनीहरूसँग एकदम शक्तिशाली हीटर मोडेल छ तर उच्च ऊर्जा दक्षताको साथ। यसले हामीलाई धेरै उच्च लागत बिना कोठाहरू सजिलै तताउन मद्दत गर्नेछ। मोडेलहरू समायोज्य शक्तिको साथ आउँदछन् यसलाई आवश्यक परिस्थितिहरूमा अनुकूलन गर्न।
यदि तपाईं पोर्टेबल र सजिलै बोक्न मिल्ने सिरेमिक हीटर मोडेलहरू चाहनुहुन्छ भने, यो तपाईंको ब्रान्ड हो। यसलाई कतै ढुवानी गर्न सजिलो र घरमा समाहित गर्न सजिलो भएको सानो मध्ये एकको रूपमा गणना गरिन्छ। तिनीहरू साना कोठाहरू तताउन र तिनीहरूलाई यात्रामा लैजानको लागि बनाइएका छन्।
तिनीहरू "हीटर च्याम्पियन" को रूपमा चिनिन्छन्। र यो यो हो कि यी मोडेलहरू जस्तै सानो आकार तर ठूलो दक्षता जब यो कोठा भर गर्मी वितरण गर्न आउँछ। तिनीहरूसँग फ्यानहरू छन् जसले उत्कृष्ट प्रदर्शनको साथ काम गर्दछ र गर्मीलाई राम्रोसँग वितरण गर्न अनुमति दिन्छ। यसमा आवश्यकताहरू समायोजन गर्न पावर नियमन प्रणाली छ।
मलाई आशा छ कि यो जानकारी संग तपाईं सिरेमिक हीटर बारे थप जान्न सक्नुहुन्छ।
1 सबै भन्दा राम्रो सिरेमिक हीटर
1.2 Cecotec सिरेमिक हीटर तयार न्यानो
1.3 Orbegozo FHR 3050 सिरेमिक हीटर
1.4 XAXAZON बाथरूम हीटर
1.5 Olimpia Splendid Wall माउन्ट गरिएको इलेक्ट्रिक सिरेमिक हीटर
1.6 प्रो ब्रीज मिनी सिरेमिक हीटर
2 सिरेमिक हीटर के हो
3 सिरेमिक हीटरका फाइदाहरू
4 सिरेमिक हीटर कसरी छनौट गर्ने
5 सिरेमिक हीटर वा फ्यान हीटर?
6 सिरेमिक हीटर को सबै भन्दा राम्रो ब्रान्ड
स्टोभ » सिरेमिक हीटर